तृष्णा (लघुकथा) - Lekhapadhi लघुकथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:०५ मा प्रकाशित
“लौ न अलिकति पिरो अमिलो अचार पनि खान देओ । यो जाउलोको झोल मात्र कति खानु ।”
“कसरी दिनु आमा ? यस्तो ज्वरो आएको बेला । डाक्टरले पनि चिल्लो, पिरो, अमिलो सबै बार्नु भनेका छन् । केही दिन पछि निको हुन्छ अनि खाँदा हुन्छ नि ।” छोराबुहारी सम्झाउँथे ।
७ दशक पार गरेको शरीर, त्यसमाथि ज्वरोले गालेको थियो । हप्ता दिन अघि सम्म साह्रै फुर्तिली थिइन् ।
हप्ता दिनदेखि उच्च ज्वरोले च्यापेको आमाको खाने बेलामा रोइलो हुन्थ्यो । ७ दशक पार गरेको शरीर, त्यसमाथि ज्वरोले गालेको थियो । हप्ता दिन अघि सम्म साह्रै फुर्तिली थिइन् । प्रायः घर वरिपरिको बारी गोडमेल गरेर दिन बिताउँथिन् ।
आफ्नै लागि भएपनि मुलाको अचार, निम्की, टमाटरको अचार बनाएर सिसाको बयममा राख्थिन् रोपाईको बेला ।
आमालाई खानामा जेको भए पनि अचार चाहिने नै । कुनै दिन अचार नभए एक थोपा चुक अमिलोमा नुन खोर्सानी चोबेर भएपनि खानुपर्ने । निम्की अचार उनको प्रिय अचार । आफ्नै लागि भएपनि मुलाको अचार, निम्की, टमाटरको अचार बनाएर सिसाको बयममा राख्थिन् रोपाईको बेला । घरमा बिरामी आमा । दुवै छोराबुहारीलाई मेलापातको चटारो थियो । जसरी नि रोपाई सक्नु नै थियो । पल्लो घरको छिमेकी कान्छीलाई आमालाई यसो हेरविचार गरिदिनु भन्दै मेलापातातिर लागे ।
कान्लामुनिको बारीमा सर्याकसुरुक आवाज आयो । आमा त बारीमा गोडमेल गर्दै थिईन् ।
रोपाई सकेर घाम अस्ताउनु अघि नै घर फर्के । दुबै सरासर आमाको कोठा गए । आमा कोठामा थिइनन् । दुवैको मनमा खटपट भयो । आमा खोज्न थाले । कान्लामुनिको बारीमा सर्याकसुरुक आवाज आयो । आमा त बारीमा गोडमेल गर्दै थिईन् । दुवै अचम्मित । छोरो आमा लिन बारीतिर झर्यो । बुहारी खाना बनाउन भान्सा छिरिन् ।
“ए आमा ! सन्चो नभएको मान्छे कता बारीमा काम गर्न लागेको ? ल हिँड्नु भित्र छिटो ।” छोरो
आमालाई भित्र लैजान जोडबल गर्दै थियो । त्यतिकैमा बुहारीको टड्कारो आवाज आयो “हैन यो बयममा भएको निम्कीको अचार कसले खायो हँ ? भाँडो त आधा पारेको छ ।”
छोराले पुलुक्क आमाको मुखमा हेर्यो । आमा मन्दमन्द मुस्कुराइरहेकी थिइन् ।
(निम्की: कागतीको बोक्रा हल्का घोटेर नुन हालेर बनाएको कागतीको अचार)
(बयम : अचार हाल्ने भाँडो)
मनिष कुमार शर्मा
(मनिष कुमार शर्मा समित् समकालीन लघुकथा लेखनका क्षेत्रमा सक्रिय आशालाग्दा प्रतिभा हुन् । उनको एक लघुकथा कृति प्रकाशनको नजिक छ । यस लघुकथामा उनले एक वृद्ध आमा पात्रको तृष्णा र उनको घरपरिवारसँगको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।)
गुलाफको फूल (व्यङ्ग लधुकथा)